Egypta : Boky avy amin’ny Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2008 10:03 GMT
Fantsona tsotra fampahalalam-baovao ny blaogy, ary izay atolony dia mety ho (zavatra samihafa toy ny) vaovao, tatitra, famoaboasana raharaha pôlitika, na sary. Misy koa ireo mpiblaogy izay mizara ny fandinihany, tantara fohy, ary poezia ao amin'ny blaoginy. Any Egypta ankehitriny, amin'izao ankatoky ny hisokafan'ny “Fampiratiana natokana hoan'ny boky” any Le Caire izao [Cairo Book Fair | Salon du Livre à Le Caire], dia marobe ireo mpanonta boky izay mamadika ireo blaogy ho boky.
Dina El Hawary – Dido's Life – dia nanapak'hevitra ny hanoratra mikasika ity tranga vaovao ity :
“Nandritra ny folo-taonany voalohany tamin'ny taonarivo faha-telo [third millennium | troisième millenaire] no nipoiran'ny hetsika ara-kolotsaina vaovao – hetsika izay tsy mbola nisy nahafantatra teo aloha mihitsy – izay iaraha-mahalala ankehitriny amin'ny anarana hoe fanaovana blaogy. Ny fomba fanoratana ao antin'ity hetsika ity dia naka endrika samihafa anivon'ireo blaogy marobe izay azo tsidihina amin'ny Aterineto.
Niaraka tamin'ireo mpiblaogy andiany voalohany, dia nalaky fivoatra io hetsika io ambara pahatongan'ny taona 2008 izay nanombohan'ity trano printy goavana iray hanaprinty blaogy ho lasa boky.
Ireo boky mitondra ny lohateny “Vary amin-dronono” [Rice With Milk], an'i Rehab Bassam [Ar], sy “Toy izao no tantarako” [This is My Story], an'i Ghada Muhammad no natontany printy voalohany.”
1. Tsy ity no voalohany nanaovana printy boky izay votoatina blaogy. Ilay boky “Ny mpaminany Afrikana” [El Naby El Afriqy] – blaogin'i Mina Guerges dia efa navadika ho boky aman-taonany maro izao.
2. Ny Vary amin-dronono, karazana sosoam-bary miharo ronono, na Rozz Belabban, dia tsindrin-tsakafo Egyptiana [dessert].
21 Septambra 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
29 Aogositra 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
08 Aogositra 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Izaho koa aloha ra-Tomavana mieritreritra ny toy izany mihitsy a! fa mbola mila fanitsiana kely ihany aloha…Gaga ihany aho hoe hay efa betsaka ihany izay voasoratro nandritra ny roa taona latsaka izay an!
14 Janoary 2008, 10:24
Vao saika hanampy aho satria i sipaKV >> no nanpahafantatra ahy ny trano printy blurb.com >> mpamadika blaogy ho boky izay antsoiny hoe “blook”. Efa tsindrian-daona ihany maika ny hamaky ny soratananao fa dia mirary soa Ra-Jentilisa.
14 Janoary 2008, 12:23
Ary noheveriko ho diso fanoratra i sipaKV nanoratra ilay “blook” hay ve voambolana vaovao mihitsy izy io e!
14 Janoary 2008, 14:55
Blook = bl-(og) + (b)-ook 😉
14 Janoary 2008, 16:22
Vakio amin'ny teny বাংলা, 日本語, عربي, Español, Português, English